Fitohizan'ny hafatra : Dia mahafinaritra aloha ny famelabelarana ny fomba...
Nehemiah - 15/07/2013 16:46
Dia mahafinaritra aloha ny famelabelarana ny fomba fijerin'ny ts11 fa dia misaotra indrindra ^_^.
Raha ny hoe "miaraha ory amin'izay ory, ampio ny tsy manana", sns, rehefa dinihina dia tsy filazàna mifanipaka tahaky ny hoe "maina ny rano" na "mangatsiaka ny afo", fa ny fijerintsika olombelona ratsy fanahy sy tia tena no mahatonga an'izay fomba fijery izay.
Milaza ianao fa mino an'Andriamanitra (kanefa mariho tsara ny teniko, ary aza maratra fa tsy fipepopepoana anao no ilazako an'izay, fa ny demony koa dia mino ny fisian'Andriamanitra avokoa). Dia mba ametrahako fanamby ianao : "Sahinao ve ny milaza fa mahatanteraka ny sitra-pon'Andriamanitra an-tsakany sy an-davany ianao ?" Jereo tsara izao fa misy Lalàna ara-pitondrantena efa ao anatintsika hatr@ nahaterahana ahafantarantsika ny tsara sy ny ratsy, ny mety sy ny tsy mety, ary izay no mahatonga ny ankizy madinika manao hoe : "Tsy rariny izao, mba nomeko ialahy ka izaho koa mba omeo", kanefa tsy mbola nisy nampianatra azy ; kanefa tsy manaraka an-tsakany sy an-davany an'izay Lalàna izay tsy akory isika olombelona : izaho, ianao, ny olombelona rehetra (afa-tsy 1) dia samy efa nanao zavatra tsy mety, tsy mifanaraka an'izay Lalàna efa ao anatintsika izay.
Mariho koa fa tsy tongatonga ho azy ity Lalàna mampiavaka antsika @ biby ity (tsy mampaninona ny alika izao ny mivalan-drano eo @ varavaran'olona, fa isika olombelona kosa dia efa mahafantatra fa tsy mety), fa tsy maintsy misy namolavola ity Lalàna ity, ary mazava loatra fa Andriamanitra izay.
Ka impiry nandika ny Lalàna Andriamanitra aho, ianao, isika olombelona rehetra ? Tsy tambo isaina angamba, ka tsy manan-jo hanafay antsika ve ny Mpaharintsika ? Sady @'izay tsy misy fialàna pa na fialàna bala ilay izy satria zoan'Andriamanitra rahateo ny mamepetra antsika ka mamaritra ny Lalàna izay tsy maintsy arahintsika, @ maha-Mpahary antsika Azy.
Tsy tokony ahagaga izany satria lova izay fironantsika manota (izany hoe manao izay tsy mety eo imason'Andriamanitra) : areti-mandringana manaranaka atao hoe ota, izay nolovaintsika avy t@ Adama : ny hazo paiso dia tsy maintsy mamokatra paiso ary isika koa dia tsy maintsy mamokatra ota satria izay no toetrantsika
Soa ihany fa nanome lalana ivoahantsika @'izao olam-be izao Andriamanitra, dia i Jesoa Kristy, mazava loatra, satria Izy no nisolo voina antsika (izany hoe, nozakainy ny sazy sahaza antsika), ary nahafa-po an'Andriamanitra izay satria tsy nanota mihitsy na variraiventy aza Jesoa t@ fiainany ka tsy mila ho saziana nohon'ny helony manokana fa ny helok'isika no nozakainy. Nahafa-po an'Andriamanitra koa ilay izy satria Zanak'Andriamanitra rahateo i Jesoa ka hainy ny mizaka ny heloky ny olombelona rehetra t@ vanim-potoana rehetra t@ tantaran'izao tontolo izao, miaraka @ sazy sahaza azy ireo.
Zavatra 1 monja no mila ataon'ny olona 1 raha te-ho afaka dia mino an'izay ary mino an'i Jesoa Kristy, ka raha voa manao an'izay fotsiny ianao dia tsy vitan'ny manana "casier judiciaire vierge" eo anatrehan'Andriamanitra ianao fa manana tombontsoa be dia be ianao (ny sasany @'ireny ihany no nosoritako etsy ambony).
Ka mitondra antsika @ tapany faha-2 izay : ny anank1 @'ireny tombontsoa ireny dia ny finiavan'Andriamanitra hamolaka ny toe-javatra rehetra (satria tsy misy inona na inona tsy hainy) mba hitondra soa ho an'izay mino Azy, izay no tian'ny olona (na farafaharatsiny ny olona mahafehy an'izay fampianarana izay) tenenina @ hoe "ankinina amin'Andriamanitra".
Kanefa tsy midika velively izany fa hiandry ariary 100 am-pandriana ny kristiana. Misy baiko maromaro omen'Andriamanitra ny mino, ary raha fintinina izy ireo dia hoe "tiava ny namanao tahaky ny tenanao", ka ny endrika isehoan'izay fitiavana izay dia ny fanaovan-tsoa azy ireo : mitarika ny mino hiasa fatratra ho an'ny soan'ny manodidina azy ny finoana kristiana. Jereo tsara anie fa kristiana no tena manorina hôpitaly, fikambanana fiantràna, sns.
Ny hamaranako azy dia izao : mifototra @ tranga mirakitra @ tantaran'izao tontolo izao ny finoana kristiana (izany hoe ny fihombohan'i Kristy @ hazofijaliana sy ny fitsanganany @ maty), ary ity finoana ity no nitarika ny firoboroboana izaitsizin'ny siansa taorian'ny Fanitsiam-Pivavahana tany Eorôpa, ka sahiko ny mamerina fa finoana ara-pisainana (rationnelle) tanteraka ny finoana kristiana .
voromailala - 15/07/2013 17:33
Miray hevitra tanteraka amin'i booboo.
"Ici et Maintenant" io ihany no hananantsika.
voromailala - 15/07/2013 17:48
Amiko manokana izany ny tena hatao hoe fahasambarana dia tsy miankina amin'ny any ivelany fa avy aminao irery ihany. Tsy tanjona ny fahasambarana fa lalana iainana.
Ahoana no ahatongavana amin'izany?
Rehefa mitony ny saina (non-mental) dia mivoaka ho azy ilay fahasambarana, paix intérieure.
Marihana anefa fa raha mahantra ianao, na tsy ampy sakafo sns... dia hosarotra aminao ihany no ahatongavana amin'io, satria variana amin'ny fitadiavana sakafo sy vola ny sainao.
plaisir éphémère daholo ireo zavatra eto antany. Ohatra zao maniry ahazo Ipad ohatra ianao, dia velombolo ery, mikaroka vola hividianana azy, fa rehefa azonao ilay Ipad dia very ilay fahasambarana.
bandykely - 16/07/2013 10:42
Nehemiah>> Tena samihafa tanteraka ny fomba fijerintsika satria reférence tsy mitovy no raisintsika ry Nehemiah a. Ny anao ny fahasambarana dia mifandray amin'Andriamanitra sy ny baiboly ary ny ahy kosa ny fahasambarana dia mifandray amin'ny fahatanterahan'izay sarisarin-tsaiko sy izay tanjona kinasako (pure réalisation de mon idéal/projet/rêve/fantasme,...). Mahafinaritra ny tsy fitovian-kevitra satria manitikitika foana ny tsirairay hanakatra sy handalina ny ao anaty eritreriny avy.
Voromailala>> Miray hevitra tanteraka aminao aho amin'ny fomba fijerinao ny fahasambarana. Dimension iray hafa indray, ankoatra ny finoana sy ny réalisation personnelle, no entinao : ny "temps" : durable v.s éphémère.
voromailala - 16/07/2013 12:11
bandykely> Ie, azo raisina amin'ny Dimension maro ilay izy, fa azo hatao koa ny mandalina kokoa ka mandeha hatramin'ny Dimension Spirituelle.
Hoy ilay hira taloha zay hoe "Sambatra izay noana, Sambatra izay mangetaheta, ny fahamarinan'Andriamanitra".
Rehefa mangetaheta sy noana ilay tena fahamarinana ianao, ilay fitiavan'Andriamanitra, izay tsy anatin'ny "Dualité" ny fiainana (Tsara/Ratsy, Faly/Malahelo, ....) dia ho sambatra.
Izany hoe rehefa tsy manisy fitsarana izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainana sy ny zavatra hitanao dia ho hitanao fa na inona na inona mitranga aminao dia hanana paix intérieure ianao ary ahatsapa ilay fahasambarana.
Rehefa mitony ny saina dia tsy manao fitsarana izy. (Tsorina fa tsy mora ilay mampitony saina)
Tsy ny zavatra mitranga no mampijaly anao fa izay handraisan'ny sainao ilay zavatra mitranga.
bandykely - 16/07/2013 12:55
voromailala >> Mihomehy kely aho fa miverina indray ilay resaka Andriamanitra, lol.
Tena marina fa azo jerena suivant dimension maro ilay izy ary anisan'izany ny dimension spirituelle (izay efa voalazan'i nehemiah ihany koa teo ambony).
Amiko anefa dia tsy ny finoana an'Andriamanitra irery ihany no làlana ahazoana paix intérieure. Raha izay ihany mantsy dia sambatra daholo ireo olona mandeha any am-piangonana rehetra ireo. Nefa tsy izay no tsapan'ireo olona ireo fa mikatsaka fahasambarana foana izy ireo.
Anisan'ny làlana hahazoana fahasambarana ny finoana kristianina, ny boudhisme, ny sophrologie, ny islamisme,...Ny tanjon'izany rehtra izany dia ny fitadiavana équilibre eo amin'ny fiainana.
Amiko, ny tena fahamarinana (araka io nolazain'i Voromailala io) dia tsy misy. Izany hoe tsy universelle io fahamarinana io: ny fahamarinana araka ny heverin'i Voromailala dia tsy voatery hitovy amin'ny fahamarinana izay heveriko. Raha fitiavan'Andriamanitra no fahamarinana amin'i Voromailala, amiko tsy izay no fahamarinana ary tsy izay ny idéal-ko. Ny fitiavana omeko sy omen'ny fianakaviako dia ampy, ohatra, ho fahasambarana ho ahy. Ohatr'izany ihany, ho an'ny mpanao mission suicide silamo na ho an'ny kamikazé, ny famonoana ny hafa no fanehoan-kevitra hitany mahomby. Convaincus ireo olona ireo ary mahatsiaro tena sambatra ihany koa.
Hanampiako azy izany dia mbola ao anatin'ny fijerena/fandalinana ny fahasambarana ihany koa ny dimension universelle/collective/extérieure v.s propre/individuelle/intérieure. Ny évaluation amin'ny zava-mitranga amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy foana amintsika olombelona fa ny tsirairay no samy mametraka ny priorité-ny ka maha-samihafa ny conception an'ilay fahasambarana.
voromailala - 16/07/2013 14:03
bandikely> hitako hoe manana fijery malalaka ianao. Ary micomprendre anao mihintsy aho amin'ilay hoe mihomehy rehefa misy resaka Andriamanitra ny valiteny.
Samy manana ny hiantsoany azy ny olona rehetra, fa "Fitiavana" io no hitako marimaritra hiraisana.
"Fa amintsika malagasy vao miteny ianao hoe Fitiavana na Loharano, sns.... fa tsy Andriamanitra no resahanao dia lazaina fa tsy mino an'Andriamanitra dia lasa resabe."
Ilay Fitiavana resahako eto dia "Amour Inconditionnel",
fa tsy ilay fitiavan'ny mpivady na fitiavana zanaka , satria mbola misy "Dualité", miakamidina. Rehefa anatin'ilay Fitiavana tsisy fetra ianao dia mitovy daholo ny hitiavanao ny olona rehetra sy ny zavaboary rehetra.
Nehemiah - 16/07/2013 17:17
Ka mitombina anie izany e, satria fanaon'ny olona tsy mino ny Andriamanitry ny Baiboly ilay izy.
Bandykely >> Tsara ny miaiky ny tsi-fitovizan'ny fomba fijery, efa hitanao fa ny ahy dia miverina @ Andriamanitry ny Baiboly foana ny resaka, satria je lui dois tout, ary mba iriko hahazo an'izay tombontsoa izay ny olona rehetra. Delenda est cartago.
Ny zavatra angatahako anao fotsiny dia aza adinoina ny zavatra nolazaiko fa hevero ihany sao dia mba mety ilainao indray androany, satria finoana kristiana "manara-penitra" no novelabelariko fa tsy fijeriko manokana.
Misy fanontaniana manitikitika aho, tsy misy fitaka eo ambadika : inona no heverinao ho asan'Andriamanitra @ fiainanao sy @'izao tontolo izao ? Satria raha mino ianao fa noforonin'Andriamanitra fotsiny izao tontolo izao dia avy eo navelany handeha eo fa tsy noraharahiany intsony mihitsy, déiste ianao.
voromailala - 16/07/2013 17:47
Nehemiah> Mitombina amin'ny ankamaroan'ny Malagasy satria efa no-"Formaten'ny" vahiny tamin'ny fivavahana Kristianina ny malagasy.
taloha ny nahatongaban'ny misionera (anglisy, na Frantsay) dia mbola manana fijery malalaka ny malagasy.
Izay mahatonga an'i Bandykely miteny hoe vao misy resaka dia Andriamanitra na baiboky foana no havalin'ny Malagasy.
Nehemiah - 17/07/2013 07:37
Mbola resaka fomba fijery ihany izao satria tsy ni-formater an'iza na iza ny misiônera fa nitory fotsiny, fa ny finoana kristiana mihitsy no exclusive, sady hita fa tsy mahasoa ny fanompoana razana sy sampy, ka nahilika.
Raha mino ny Baiboly ianareo dia finoana an'Andriamanitra tokana tratran'ny fahalovana ara-panahy ny finoana malagasy fahiny, satria nolovaina avy t@ fiparitahana tany Babela : nahalala an'Andriamanitra ny mponina tany, fa sady efa tratran'ny fanompoan-tsampy novoizin'i Nimroda no niparitadritaka manaraka ny foko ts11 avy eo, ka azo lazaina fa namerina ny zavatra @ laoniny ny fitorian'ny misiônera.
Kanefa mbola tsy nety nilefitra ihany ny gasy fa mbola samy nanaraka an'izay lalany any, hany ka tsy afaka niravoravo tanana Andriamanitra fa tsy maintsy manafay antsika, raha azonareo ny tiako tenenina.
voromailala - 17/07/2013 09:39
Iza no milaza fa tsy nahasoa ny malagasy sy fombafomba sy finoan'ny razana taloha?
Fanontaniana tsara hapetraka hoe hoviana no sambatra kokoa ny malagasy talohan'ny nahatongavan'ny Kristianisma tany sa taorinany, ankehitriny izany?
Araka noresahiko raha ohatra ka ny arabo no tonga nampiely ny silamo tao Madagasikara.
dia mety namaly ahy ianao hoe raha ny korao no harahana dia toy izao sy toy izao. Io ilay lazaiko hoe "Formatage".
Ohatra ny système d'exploitation amin'ny ordinateur.
Dago zao: Formatena (fafana fivavahan'ny ntaolo) dia noinstallena SE Kristianisma,
Firenena arabo Formatena dia noinstallena fivavahana silamo.
Tsy compatible tamin'ny solosaina Dago ny fivavahana silamo raha ts'izany efa afaka noformatena sy noinstallena.
Nehemiah - 17/07/2013 09:52
Eny ary, andao isika hiverina @ fivavahan-drazana ka raràna izay tsy ombiasy hampiasa soratra, asiana ratsy na vonoina mihitsy ny zaza menavava teraka t@ vintana mahery, tsy alefa @ sekoly ny ankizivavy, miandry an'izay sitrapon'ny mpanandro alohan'ny ahatanterahana an'ity asa sôsialy sy fomba rehetra ity, sns ary indrindra omena vahana ny fisainana sisa tavelan'ity fivavahana ity mbola raiki-tapisaka @ sain'ny ankamaroan'ny Malagasy hoe ny tonon'andro tsy mahalehilahy ka mahatonga an'izao finiavana tsy hanao rahan'ny gasy izao.
voromailala Fanontaniana tsara hapetraka hoe hoviana no sambatra kokoa ny malagasy talohan'ny nahatongavan'ny Kristianisma tany sa taorinany, ankehitriny izany?
Post hoc ergo propter hoc ? Hadisoana lôjika izany : tsy hoe nitranga taorian'ny zavatra 1 ny zavatra 1 dia vokany avokoa.
bandykely - 17/07/2013 11:00
Mitady hivoana kely any amin'ny finoana na tsy finoana an'Andriamanitra ny resantsika nefa hasambarana ("bonheur") no niandohan'ny loha-hevitra. Hovaliako ihany anefa ny fanontanian'i Nehemiah na dia efa natsidiko teo ambony aza ny fomba fijeriko.
Inona no heveriko ho asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'izao tontolo izao?
Amiko, araka ny foto-pisainako, ny asan'Andriamanitra dia manoro ny làlana tokony ho raisin'ny tsirairay amin'ny fiainana. Manana rôle de balise izy (miala-tsiny amin'ny teny vahiny) tahaka ny ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Ray aman-dreny am-panahy izany, amiko, Andriamanitra.
Raha maka ohatra tsotra, dia tahaka ny asan'ny mpandrindra ny famoivoizana (agent de sécurité routière) ny asan'Andriamanitra. Anjarany ny mametraka ny règles, ny panneaux, ny balise, ny sazy mba hampirindra ny andavanandron'ny tsirairay, na ny société iray. Ny baiboly no tahaka ny code de la route mirakitra ireo règles/conventions rehetra mipetraka ireo.
Eto anefa no tsy mampitovy ny hevintsika. Toro-hevitra no omen'ny baiboly amiko (tahaka ny omen'ny ray aman-dreny, na omen'ny code de la route) fa ny tsirairay dia tompon''ny safidy feno na hanaraka na tsy hanaraka izay voalazan'ny baiboly. Amiko izany, repère Andriamanitra, repère ny baiboly, saingy tsy hanaraka velively an-jambany izay lazain'ny baiboly aho. Raisiko izay mety amiko ary tsipahiko (ariko) izay tsy mety amiko. Satria, izaho irery ihany no tompon-tsafidy amin'ny fiainako fa tsy Andriamanitra akory. Ary izay tiako no ataoko fa tsy izay tian'Andriamanitra.
Déiste ve ianao?
Tsy te-hiditra anaty catégorie/cliché mihitsy aho ry Néhémia a. Amiko ny fiainana tsy hoe rehefa tsy kristianina aho dia mpanota, na déiste, na athée, na.....Ny fantatro dia tsotra: rehefa milamina ny saiko, ny eritreritro, ny conscience-ko; mahazo fy sy tsy manembatsembana ny hafa aho dia sambatra aho izay. Tsy miditra/niditra/hiditra antokom-pinoana na antoko-kevitra inona aho satria sady tsy ilaiko ny hi-influencer olona no tsy ilaiko no hitorian'ny olona teny. Anjarako izaho irery no misafidy ny làlana hitondrako ny fiainako sy mahasambatra ahy.
Voromailala>> marina mihitsy ny voalazanao fa no-formater n'ny occidental isika malagasy hanaraka ny finoana kristianina. Ka matetika ny zava-miseho, dia raha vao discours tsy compatible amin'ilay système d'exploitation kristianina no ampidirina amin'ny malagasy kristianina, dia tsy eken'ny olona (tsy mi-démarre ilay application). Izay no avantagen'ny système ouvert : compatible amin'ny rehetra rehetra.
Nehemiah>> Tahaka ny baiboly sy tahaka ny zava-drehetra dia misy mety ary misy tsy mety ny fomba malagasy. Mivoatra ny fomba araky ny toe-trandro. Ka izay olona na firenena mahavita mi-adapter ny fombany amin'ny évolution an'ny société/mondialisation ankehitriny no hahita ny fahasambarana amin'ny lafiny rehetra (matériel, psychologique, spirituel,...). Indrisy anefa fa mitady ho jamban'ny baiboly isika malagasy ka tsy hahalala biby afa-tsy ny sahona. Mbola resaka lava be io ary loha-hevitra hafa mihitsy: "la religion, un instrument de domination" (Jereo ny histoire religieuse, ny tantaran'ny christianisme, ny colonisation,....).
Azafady re tompoko fa lava dia lava ny resako
voromailala - 17/07/2013 12:01
Nehemiah> raha ny fijerinao ny finoanan'ny razana taloha izany dia zavatra ratsy no ankamaroany? fa raha hanontaniana ianao amin'izao fotoana dia holazainao fa sambatra kokoa zany ny gasy, mifankatia, tsy miadiady, mahaleotena,FFKM no mandamina ny rehetra,.....?
bandykely> tsy ratsy indray ilay hoe application tsy compatible lol .Ohatra hoe Windows le Kristianisme, dia Linux ny OpenSource.
Nehemiah - 17/07/2013 15:42
Bandykely >> Tsy mampatahotra ahy ny halavàna fa aza matahotra. Raha toa ka misy Andriamanitra dia tsy mivoana ny resaka satria Izy no loharanon'ny soa rehetra.
Misaotra aloha nanazava ny fomba fijerinao, misoroka ny malentendus ny manao an'izay.
Raha ny resaka religion dia tsy dia iraharahiako firy ny tena marina, ny ahy ny finoana kristiana no anton-dresaka fa tsy ny fivavahana. Ny fampianaran'i Kristy tsy misy an'izany hoe zanaho ny firenen-kafa, ary tiako marihina fa ny Ejipsiana sy ny Babylôniana ary ny Rômana dia nanjanaka firenen-kafa taloha lavitry ny nipoiran'ny finoana kristiana.
Tsy hoe be dia be ny vola sandoka mitobaka @ tsena dia ratsy ny vola tena izy e .
Ny ota anie tsy vitan'ny mamono olona na mijangajanga, fa izay rehetra ratsy nataonao na soa tsy nataonao kanefa afaka nanao an'ilay izy ianao dia efa tsy mifanaraka @ Lalàn'Andriamanitra. Jereo izao fa hafa ho an'ny Amerikana ny mandaka alika mirenireny sy ny mandaka an'i Obama, na dia tsy mankasitraka azy toy inona aza. Mampigadra ny faha-2, satria manana ny fahamasinany eo anatrehan'ny olom-pirenena Amerikana i Obama. Kanefa tsy masina lavitra noho i Obama ve Andriamanitra Andriananahary mpamorona an'izao tontolo izao ? Tsy manan-jo hamepetra antsika ny zavatra tokony ataontsika ve ?
Ianareo ve efa nahita "Toy Story" ? Nitotona t@ tranon'ny ankizivavy kely izay i Buzz l'Éclair (kilalao), ka nomen'ilay ankizivavy ny rôle-n'ny lady izy sady nampanaoviny dînette . Nampalahelo i Buzz fa nivarahontsana tsy misy toy izany, eny, efa mainka ho very "fanahy" mbola velona izy : tsy mba ny hanao dînette no namoronana azy ! Ka tahak'izay koa isika : nihataka t@'Andriamanitra Ray malalantsika ary tsi-mitsaha-manao an'izay tsy sitrany. Na dia eritreritra tsy mendrika 1 aza dia efa ota. Izay no mahatonga ny ratsy rehetra ataon'ny olombelona @'izao tontolo izao.
Satria "raison de vivre" no lohateny, kanefa na dia Einstein, izay tsy kristiana, aza dia nanao hoe : "Une vie qui n'est pas vécue pour les autres ne vaut pas la peine d'être vécue."
Fa izany hoe raha resy lahatra ianao fa afaka manao an'izay sitrak'Andriamanitra isan-tsegondra vaky, na @ zavatra ataonao na @ teninao na @ eritreritrao dia aza manao kristiana an ! Tsy tonga hiantso olo-marina i Kristy fa tonga hiantso mpanota, mba homeny ny fiainana mandrakizay, izany hoe ny fahalalàna an'ilay Andriamanitry ny Baiboly.
Raha tsy izay dia mahalaza azy tsara ny bokin'ny Mpitoriteny : zava-poana ny zava-drehetra.
Nehemiah - 17/07/2013 15:46
Fa maninona ho'aho ny olona tsy tia finoana kristiana no tsy maintsy manendrikendrika ny finoana kristiana ho vokatr'izao korontana @ firenena izao, kanefa ny mifanohitra an'izay no zava-misy ? Hony ?
Mba voamarikao ihany ve ny teniko teo aloha momba ny hadisoana lôjika nataonao sa dia nodianao fanina fotsiny ?
voromailala bandykely> tsy ratsy indray ilay hoe application tsy compatible lol .Ohatra hoe Windows le Kristianisme, dia Linux ny OpenSource.
Angamba ny mifanohitra @'izay no zava-misy : ny finoana kristiana ranoray dia Linux satria sécurisé tsara, tena ataon'ny olona tsy mahafantatra azy hoe paranoïaque mihitsy. Ny "saina misokatra" indray dia Windows satria malaky mandray an'ireto virus rehetrarehetra ireto.
voromailala - 17/07/2013 16:01
Nehemiah> Fa maninona rehefa manenjika ny finoana ny razana ianao dia tsy maninona? Izaho tsy manenjika ny finoana kristianina fa milaza ny zavamisy.
Momba ny SE, ny finoana Kristianina no be mpanaraka indrindra, toy ny Windows. Fermé ny SE Windows, toy ny Kristianina, olona vitsy ihany no manapaka ny dogma sy lalana arahana.
Linux kosa dia OpenSource, ny olona rehetra afaka maka azy dia manao amin'izay hitavany azy avy eo.
Malalaka kokoa ireo olona mampiasa Linux noho ny windows, matetika ny olona pro Windows manaratsy Linux foana .
Nehemiah - 17/07/2013 16:11
Satria ny voka-dratsy notanisaiko teo dia vokatry ny fivavahan-drazana avokoa (azonao atao ny manaporofo fa diso aho raha manana hevitra hafa) fa ny anao indray dia fanendrikendrehana satria tsy vokatry ny fampianaran'i Kristy ny zava-dratsy notanisainao.
Torak'izay koa mbola tsy nasianao fiheverana mihitsy ny filazako momba ny hadisoana lôjika nataonao.
voromailala - 17/07/2013 16:57
Fa maninona moa ianao tonga dia mitsara fa hoe diso ny lojikako? samy manana lojika antsika isika.
Za tsy afaka ny hiteny hoe tamin'ny andron'ny fivavahana ntaolo no sambatara kokoa na tsia ny gasy satria izaho tsy nihaina tamin izany fotoana izany, fa ny azoko hambara amin'izao fotoana sy hitako maso dia tsy sambatra ny ankamaroan'ny malagasy, anisan'izany ireo Kristianina.
Nehemiah - 17/07/2013 17:06
Tsy "mitsara" anao aho fa izay no zava-misy : tsy misy anie izany hoe samy manana ny lôjikany (raha tsy izay dia tsy hisy olona ho afaka mampiasa solosaina) fa ny lôjika tena lôjika dia iombonana, ny principe de causalité (antony tokana ---> vokatra tokana) dia tsy azo ihodivirana mihitsy, ary tsy mitombina ny filazanao fa satria nitranga taorian'ny fidiran'ny finoana kristiana (hono) ny ratsy tanisainao dia tsy maintsy ny finoana kristiana no nahatonga an'izay.